Kuwedzera Dhijitari Kusvika mune Nhare-yekutanga, Post-Cookie Nyika | Martech Zone
Kuwedzera Dhijitari Kusvika mune Nhare-yekutanga, Post-Cookie Nyika
China, June 25, 2020 China, June 25, 2020 Douglas Karr
Sezvo hunhu hwevatengi huri kuramba huchifamba zvinoshamisa kune nhare mbozha, vatengesi vemakambani vakachinjisa zvinoenderana nekwavo nzira dzekushambadzira nhare. Uye, sezvo vatengi vachinyanya kushandisa maapps pamafoni avo akangwara, hazvishamise kuti mu-app kushambadzira kunoraira chikamu cheshumba chekushambadzira nhare kushandisa. Pre denda, nharembozha kushambadzira kwaive munzira yekuona 20 muzana kuwedzera muna 2020, sekureva kweMarketer.
Asi nevanhu vazhinji vachishandisa akawanda madhizaini uye vachidya midhiya munzira dzakasiyana siyana, zvinoratidzwa kunetsa kune vashambadzi kuti vanzwisise kuzivikanwa kwemutengi munzvimbo yavo yese yedhijitari. Chechitatu-bato makuki aimbove ari ekutanga nzira yekubatana nevatengi kuburikidza nemagariro uye dijito chiteshi; zvisinei, makuki auya pasi pekuwedzera kwezvibodzwa kubva kune makuru ekupa mabhurawuza seGoogle, Apple neMozilla. Uye Google yakazivisa kuti ichaburitsa yechitatu-bato makuki mu Chrome na2022.
Nhare dzekushambadzira ID
Sevashambadziri vemakambani vanotsvaga dzimwe nzira dzekutaridza vatengi munzvimbo yepashure-kuki, vatengesi vava kushandura marongero avo edigital ku nhare dzekushambadzira ID (MAIDs) kubatanidza maitiro evatengi pamadhizaini. MAIDs akasiyana akasarudzika akapihwa kune yega nhare mbozha uye achibatanidza MAID neakakosha hunhu senge zera, murume kana murume, chikamu chemari, nezvimwewo mashandisiro anoita vashambadzi zvinobudirira zvemukati zvemidziyo yakawanda - iyo chaiyo tsananguro yedhijitari omnichannel kushambadzira.
Tsika dzevatengi dzisiri dzepamhepo idzo vatengesi vanovimba nadzo senge nhamba dzenhare, kero, nezvimwewo hazvigone kuenzanisirwa kuvaka chimiro kuburikidza nedhijitari data chete. Kugadziriswa kwemazita kunobatsira kuzadza mukaha uyu uye kunoshandisa maitiro akaomarara kuona kana makiyi ekuzivisa ese ndeemunhu mumwe chete. Makambani senge mutengi kuzivikanwa manejimendi nyanzvi Infutor anovaka aya marudzi eInternet uye isinga zivikanwe. Infutor inosanganisa yakavanzika-inoenderana data revatengi, pamwe ne data kubva kune mamwe masosi akapararira senge yechitatu-bato hupenyu nhanho inoratidzira dhata uye yedhijitari yekutanga-bato CRM dhata, uye inozvinyora muchimiro chine simba chemutengi.
Kusvitsa Yese Yenhare mbozha ID maID kubva kuna Infutor
Infutor's Yese Nhare mbozha Ad ID ID mhinduro inzira yakakosha yekubatsira vashambadziri kuzadza post-cookie ziviso gap nekufananidza isingazivikanwe, isiri-PII nhare yekushambadzira maID ane mahedhi eemahedhi. Izvi zvinogonesa vashambadzi kuvaka zvakavanzika-zvinowirirana mapepa ekuzivikanwa uye vanoona kuti vari kusvika kune varidzi vezvinhu zvavanoda kusvika.
Inotungamirwa neayo TrueSourceTM Dhijitari Chishandiso Girafu, Infutor's Yese Mobile Ad ID maID anosanganisira kuwana kune mazana emamirioni mazana matatu emadhijitari emadhijitari uye mabhiriyoni maviri MAID / hashed email mairi. Iyi Mobile Ad ID uye yakashambadza email (MD350, SHA2, uye SHA5) dhatabhesi inoenderana neyakavanzika-inowirirana, inogamuchirwa nemvumo. Aya mazita asingazivikanwe anochengetedza ruzivo rwunozivikanwa (PII) apo achibatsira vashambadziri kugadzirisa nekubatanidza zvitupa zvemadhijitari mumapuratifomu uye mukati megirafu ravo rekutanga-bato.
Infutor's Yese Nhare mbozha Ad ID mhinduro inopa vashambadziri imwe yakawedzera dura rekuchengeteka uye nekukasira kuwana nekukurumidza resolution resolution. Mhinduro yacho inopa imwe nhanho yedata inowedzera kusvika kwevatengesi kuburikidza nekuzivikanwa kwedhijitari uye kuyambuka-chigadziriso chemidziyo uku uchichengetedza kutonga pamusoro pekutanga-bato PII. Izvi zvinogonesa mameseji eomnichannel meseji nekuvandudza chikamu chevateereri uye kuita kweumwe munhu ruzivo rwevatengi.
Yese Nhare mbozha ID maID data rakacheneswa zvine mutsindo uye rinotorwa kubva kune mvumo-based kunyorera kuburikidza akawanda akavimbika masosi, kuve nechokwadi chemhando yepamusoro yedhijitari data. Chivimbo Chekuvimba (1-5) inoshandisa algorithm yekushandisa ichishandisa zvinhu zvakaita seyakawandisa uye kudzokorodza kweMAID / hashi maviri ari kutaridzwa pamwe chete, kuwedzera syntax uye zvimwe zvinogoneswa kuitira kuti vatengesi vazive mukana wevaviri vari kushanda.
Kuisa MAIDs Dhata Kushanda
Dhata yekuchinjisa chikuva BDEX inosanganisa data kubva kune akawanda masosi uye nekurinyatso kuichenesa kuti ive nechokwadi chekurudyi nemari yemazita ayo ekuzivikanwa. Iyo BDEX Inozivikanwa Girafu inoratidzira inopfuura tiririyoni data ma siginicha uye inopa simba kuvashambadzi kuti vaone mutengi seri kweimwe data data.
Takabatana naInfutor, BDEX yaisanganisira iyo yakazara MAIDs mhinduro dhata mune iyo data dhizaini. Izvi zvakawedzera vhoriyamu yedhijitari yedhijitari yeBDEX kuti ipe mabranders uye vashambadziri mukana wekuunganidzwa kuzere kwe MAID / hashed email vaviri vaviri. Nekuda kweizvozvo, BDEX yakasimbisa iyo dhatabhesi yedhijitari iyo inogona kupa vatengi nekuwedzera zvakanyanya nhamba yemafoni ekushambadza maID uye yakamisikidza maemail kero mune yayo yese.
Munyika yedata iri kutsvaga dzimwe nzira dzecokie-based digital tarisheni, iyo BDEX-Infutor kudyidzana iri panguva inoshamisa. Shanduko yedu yedata yakavakirwa kuti ipe simba kubatanidza kwevanhu uye Infutor's Yese Nhare YeAdhi Sarudzo Solution kuwedzera kwakasimba kutibatsira kushandira iri kukurumidza kumusika kudiwa.
David Finkelstein, CEO weBDEX
Kuwana Infutor's Yese Nhare mbozha Ad ID mhinduro, inogarwa panzvimbo uye inowanikwa mune dzakawanda dhirivhari yekuendesa, ndiko kukunda kwevatengesi vanotsvaga rakazara uye razvino dhata rekugadzirisa dhata. Vashambadzi vanoshandisa data rakapfuma renhare kuti vawedzere kusvika kwavo nekushandisa zvitupa zvemadhijitari kunongedza vatengi pamidziyo yenhare, kugadzira mameseji eomnichannel, inovandudza mitengo yekukwira yedigital uye programmatic yekumisikidza uye kugonesa chinongedzo chinobatanidza uye resolution yekuziva.
mune mobile-kutanga, post-kuki pasirese, vanobudirira kwazvo vevatengesi veadhijitari vari kushandisa kuzivikanwa girafu dhata uye kugadziriswa kwechitupa kupa kuenderera mberi pamidziyo uye neruzivo rwevanhu runodiwa nevatengi. Robust MAIDs dhata yakakosha mukuvandudza kugadziriswa kwemazita uye isingaenzaniswi-kune-online chimiro chivakwa munzvimbo yepashure-kuki uye inopa kuenderana kwakaringana kunovandudza kutendeuka kwemitengo uye kunowedzera iyo ROI yekushambadzira kwedhijitari kushandisa.
Verenga Zvakawanda Nezve Infutor's Yese Yenhare Ad Ad ID Solution
Tags: ad idsBDEXcookie-shomaInfutor Yese Nhare mbozha Ad IDmusikanavasikananharembozha kushambadzanharembozha ad idsmobile-kutangapamusoro-pafungidziroYese Yenhare Yekutengesa ID ID